सबै वडामा सचिव नहुँदा कसरी चलेको छ निस्दी गाउँपालिका - Boli Dainik
सबै वडामा सचिव नहुँदा कसरी चलेको छ निस्दी गाउँपालिका
बोली । माघ २९ – निस्दी गाउँपालिकाका सातै वडामा सचिव नहुँदा सेवाग्राही नागरिकहरु समस्यामा परेका छन् ।
निस्दी गाउँपालिका भित्र भएका ७ वटा वडामा वडा सचिव नहुँदा विभिन्न प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा नागरिकलाई समस्या परेको हो । वडा सचिवको जिम्मेवारी विभिन्न शाखाका कर्मचारीले धान्दै आएका छन् । वडा कार्यालय संग सम्बन्धित अनुभव र विषय समेत नमिल्ने कर्मचारीले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएकाले काममा समेत ढिलाई हुने नागरिकहरुको गुनासो छ । धेरेजसो प्रविधिक बिषय संग सम्बन्धित कर्मचारी र कार्यालय सहायक वडाको काममा आफै स्पष्ट छैनन् ।
निस्दी गाउँपालिका वडा नं १ मा खानेपानी प्राविधिकले वडा सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन् । त्यस्तै वडा नं. २, ३, ६ र ७ मा स्वास्थ्यकर्मीले वडा सचिवको काम गर्दै आएका छन् । वडा नं. ४ मा गाउँपालिकाका जिन्सी शाखाका नायब सुब्बाले जिम्मेवारी लिएका छन् । वडा नं. ५ मा भने कार्यालय सहायकले वडा कार्यालयको कामकाज सम्हालिरहेका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्त बहादुर सारुले कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदासम्म विभिन्न शाखाका कर्मचारी परिचालन गरेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष सारुले कार्यालयमा हुने कुनैपनी कामकाज नरोकिएको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको लगभग २ बर्ष भईसक्दा पनी कर्मचारी समायोजन गर्न नसक्दा नागरिकको काम गर्न समस्या भएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनिए पनि स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहमा चुनौति देखिएको हो । स्थानीय तहका प्रत्येक वडाबाट जनताले सेवा पाउनुपर्ने भएपनि कर्मचारी अभावका कारण त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।
वडामा कर्मचारी नहुँदा नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधिहरुको समेत गुनासो छ । पाल्पा जिल्लाका ८१ वटा वडा मध्ये ३० वटा वडामा वडा सचिव छैनन् । वडामा सचिव नहुँदा नागरिकहरुले स्थानीय सरकार पाएको महसुश गर्न सकेका छैनन् ।